Blaze Meter: Sehatra fitsapana entana ho an'ny mpamorona | Martech Zone
BlazeMeter manome ny mpamorona sehatra fanandramana enta-mavesatra mba hanahafana ireo tranga misy amin'ny mpampiasa momba ny rindranasa tranonkala, tranokala, fampiharana finday na serivisy amin'ny tranokala, azo ovaina hatramin'ny 1,000 300,000 ka hatramin'ny XNUMX+ mpampiasa miaraka. Ilaina ny fanandramana enta-mavesatra ho an'ireo tranonkala sy rindranasa satria maro no mahavita tsara eo am-pamolavolana, saingy tapaka eo ambanin'ny faneren'ny mpampiasa miaraka.
BlazeMeter dia ahafahan'ny mpamorona sy ny mpamorona refesina mamantatra haingana izay karazana entana ao amin'ny tranonkalanao
ary ny tranonkala na ny fampiharana finday dia tena mahazaka. Ny fiasa BlazeMeter dia misy:
Tsy misy hidin-trano mpivarotra - azo oharina amin'ny Apache JMeter ka tsy teknolojia fananana izany. Mampiasà script na plugin JMeter tsy mila fanovana.
Maintenance Free - tsy ilaina ny fametrahana na fametrahana satria fitsapana fampisehoana an-tsehatra amin'ny rahona io.
Fahaiza-mihetsika mandeha ho azy - manandrama mpampiasa 300, 3,000 na 300,000+. Ny teknolojia famatsiana dia mandefa automatique on-demand, atokana ho an'ny fitsapana tsirairay.
Fanompoan-tena sy fangatahana - Tsy ilaina ny tsingerina fivarotana na ny famatsiana loharanom-pahalalana mialoha. Mahazo miditra tsy voafetra amin'ny fahafaha-manao fanandramana tsy voafetra ianao 24/7.
Fanaraha-maso ny lafiny fampiharana - Fanaraha-maso feno Fampiharana fampiharana (APM) ho an'ny angon-drakitra an-tsipiriany momba ny haavon'ny fampiharana mba hamaritana sy hamakafaka ireo sombin-javatra fampisehoana.
Integration - fampidirana APM miaraka amin'ny vahaolana ambony toy ny New Relic manomeza fahitana farany ho an'ny mpizara, fampiharana (tranonkala sy finday), ary fanaraha-maso ny traikefan'ny mpampiasa. Ny fampidirana dia ahitana an'i Jenkins CI (CloudBees), Bambu (Atlassian), TeamCity (JetBrains), JMeter Plugin ary ny hafa.
Fanohanana ny Protocol feno sy ny fahaiza-manaon'ny Scripting avo lenta - mamorona fitsapana sarotra izay manahafana ny tena asan'ny mpampiasa ao amin'ny tranokalanao na ny app anao.
Loadan'ny mpizara zava-misy sy marina - mamorona mpitsidika avy amina toerana jeografika marobe indray mandeha ary zarao amin'ireo mpizara maro ny enta-mavesatra mba hampidirana ny fifandanjana entana.
Fanohanana finday - Andramo ireo fampiharana finday sy tranokala misy fandraketana fitaovana finday. Hizaha toetra tsara ny fahombiazan'ny finday amin'ny alain-tahaka amin'ny tambajotra finday.
Tatitra momba ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy -izaha ny refin'ny ambaratonga lehibe sy ny haavon'ny singa miaraka amin'ny fanaovana tatitra momba ny riandrano.
Tags: apache jmeterapmFanaraha-maso ny fahombiazan'ny fampiharanaAtlasianavolotsanganablazemetervahaolana fitiliana enta-mavesatra amin'ny rahonarahona rahonajenkins cijetbrainsjmeterlatencyfanandramana enta-mavesatrafitsapana enta-mavesatra fampiharanafanandramana enta-mavesatra findaysaasekipa misy ekipafanandramana enta-mavesatra amin'ny tranonkala